घोर कलियुग : २ सन्तानकी भाउजु लिएर देवर भागे, प्रहरीमा पक्राउपछिको बयान सुन्दा दुनियाँ चकित « TopStar Khabar
चिसो मौसममा रुघा, खोकी र दमले धेरैलाई तनावमा पारेको हुन्छ । यसैकारण गुजरातको सूरतमा काम गर्ने डा. दिक्षा भावसार रुघा, खोकी र दम भगाउनका लागि अमलालाई रामबाण उपचार मान्छिन् । डा. दीक्षा एक आयुर्वेदिक डाक्टर हुन् । उनका अनुसार चिसो मौसममा रुघा, खोकी र दमको समस्या हुनेहरुले अमलालाई कुनै पनि रुपमा खान सक्छन् ।डा.दीक्षाका अनुसार रुघा, खोकी र दमका बिरामीले अमलाको प्रयोग निम्न तरिकाले गर्नुपर्छः
अमला पाउडरःडा. दीक्षाका अनुसार रुघा, खोकी र दमको समस्या चिसो समस्यामा अत्यधिक हुन्छ । यसबाट पार पाउनका लागि अमलाको पाउडर बनाउनुहोस् । यो पाउडरमा आधा चम्चा मह मिसाएर बिहान बेलुका खानुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानी पिउनुहोस् । महले चिसो मौसममा शरीरलाई तातो राख्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अमला खाली पेटमा खानुहोस् । खाली पेटमा अमला खाँदा छिटो फाइदा पुर्याउँछ ।
अमला जुसःजसलाई चिसो मौसममा रुघा, खोकी र दमको समस्या हुन्छ, उनीहरुले अमलाको पाउडरबाहेक जुस पनि पिउन सक्छन् । डा. दीक्षाका अनुसार अमलाको जुस निकालेर तातो पानीसँग बिहान खाली पेटमा खानुहोस् । यसका लागि तपाईं २० देखि २५ मिलिलिटर अमलाको जुस र तातो पानी खानुहोस् । यसमा थोरै बेसार हाल्नुहोस् । अमलाले कफलाई पगालेर बाहिर निकाल्ने काम गर्छ ।
च्यवनप्रासःच्यवनप्रासमा मुख्य तत्व अमला हुन्छ । त्यसैले तपाईंले एक चम्चा च्यवनप्रासलाई तातो पानीसँगै खानुहोस् । बिहान खाली पेटमा वा खाना खाएको दुई घण्टापछि यो खानुहोस् । यसले रुघा, खोकी र दममा निकै फाइदा पुर्याउँछ ।
अमला क्यान्डीःअमला निकै स्वादिलो हुन्छ त्यसैले धेरै मानिसहरु यो खान रुचाउँछन् । त्यसैले यसको तपाईं क्यान्डी बनाएर खानुहोस् । यसका लागि तपाईं अमलालाई काटेर घाममा सुकाउनुहोस् र एउटा डिब्बामा राख्नुहोस् । त्यसपछि यसलाई दिनदिनै खानुहोस् । यसले तपाईंको खोकी, कोल्ड र दममा मद्दत गर्नेछ ।
अमला कसका लागि फाइदाजनक ?डा. दीक्षाका अनुसार अमलाले ४० वर्षभन्दा मुनिका लाई बढी फाइदा पुर्याउँछ । यद्यपि, जसलाई जोर्नी दुखाईको समस्या छ उनीहरुले अमला खानु हुँदैन । तर यदि कसैलाई एसिडिटीको समस्या छ भने बिहान बेलुका अमला खान सकिन्छ ।
अब श्रीमानलाई दोश्रो विवाह गर्नबाट रोक्ने महिलालाई जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने